के तपाइलाई कहिले रिंगटा लागेको छ ? कारण यस्तो छ - के तपाइलाई कहिले रिंगटा लागेको छ ? कारण यस्तो छ
के तपाइलाई कहिले रिंगटा लागेको छ ? कारण यस्तो छ
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १७ जेठ, 08:04:21 AM
काठमाडौँ । रिँगटा लाग्दा चारैतिर वस्तु घुमेको जस्तो देखिनुलाई हामी रिंगटा लागेको भन्छौ । यो एक साधारण रोग हो तर लापरबाही गर्नु भने हुदैन ।
रक्तसञ्चार र रगतमा कमी, बढी वा कम रक्तचाप, अत्याधिक शारीरिक वा मानसिक थकान, तनाव, डर र टाउको चोटलगायतका कारणले रिँगटा लाग्छ ।
२०७५, १७ जेठ, 08:04:21 AM